Dhismaha & Warka Dhismooyinka iyo Sheekooyinka by Alietc.com - Alietc.com
Miyaad in badan ka soo baxaysaa Nidaamkaaga HVAC?
Waa maxay nidaamka HVAC? HVAC waxay u taagan tahay kuleylka, hawo-qaadashada, iyo qaboojiyaha. Waa farsamada loo isticmaalo in lagu siiyo raaxada deegaanka meelaha gudaha iyo gawaarida. Hadafkeedu waa in la helo raaxo heerkulka iyo hawo ku filan gudaha. Qaybaha ugu muhiimsan ee nidaamka HVAC: Wax ka ogaanshaha qaybaha nidaamkaaga HVAC waxay canRead More
Qolalka Qoraxdu-Ku raaxayso raaxada gudaha sidaad bannaanka u ahayd
Miyaad ka raadsataa niche nasteexo gurigaaga dhexdiisa? Hadday sidaas tahay, waxaad u baahan tahay inaad tan tixgeliso! Qolalka Qoraxda: Qolalka qoraxda, sidoo kale guud ahaan loo yaqaan Solarium, waa qol u oggolaanaya qorraxda badan iyo muuqaalada muuqaalka iyadoo laga ilaalinayo cimilada xun. Solarium iyo qolka qoraxdu waxay leeyihiin macno isku mid ah: Solarium waa laatiin loogu talagalay […]Read More
Filimado Qurxin - Ka Dhig Wax Kasta Oogadaada Lugood leh Qaab
Filimada la isku qurxiyo waa filimo isku dhejisan oo ku yimaada naqshado iyo midabyo kala duwan. Ficil ahaan dusha muraayad kasta oo caajis ah ayaa loo beddeli karaa shaqo farshaxan leh filim daaqad qurxin ah. Si loogu isticmaalo qolalka meesha qarsoodiga looga baahan yahay, filimada qurxinta waxay ku faafaan iftiinka iyagoon si qaddarin leh u goyn nalka ku hareeraysan. Filimada qurxinta waxay yareeyaan kuleylka, dawakhaad, […]Read More
Kuleyl Dabaq ka dhig Nidaamka Kuleyliyaha Dabaqa
Qof kastaa wuxuu rabaa nolol raaxo leh. Ku dhowaad marxalad kasta oo nolosha qofka ka mid ah, dadku waxay u muuqdaan inay raadiyaan waxyaabo noloshooda ka dhigaya mid dabacsan - waqti kasta, meel kasta, si kasta - xitaa qiimo kasta ha ahaatee. Wadamada qaarkood, gaar ahaan xilliga qaboobaha, sida loo kululeeyo shaki la’aan waa mudnaanta koowaad. Hal shay oo ku yimaada […]Read More
Ka ilaali darbiyadaada waxyeelada leh Ilaalada geeska
Ilaalada geeska: ilaalada geeska waa alaabooyin la alifay si looga ilaaliyo geesaha darbiga waxyeelo inta lagu darayo naqshada hada jirta. Ilaaliyeyaasha geeska waxaa lagu heli karaa qalab kala duwan, cabbirro, iyo dhammeystir. Badanaa waxaa lagu hagaajiyaa meelaha taraafikada badan sida wadiiqooyinka iyo marinnada. Waxay kaa caawin karaan yareynta kharashka dayactirka iyo dayactirka. Kala duwan […]Read More
Waxa kaliya oo aad u baahan tahay inaad ka ogaato waxyaabaha dabka dab-damiska ah
Eric Fire, Fireproof Fire Fireing wuxuu sameeyaa wax u adkaysta dabka, ama aan ololi karin. Qalabka qaar ayaa loo isticmaalaa in lagu sameeyo wax kasta oo dabka ka caagan. Waa hab difaac dab oo dadban. Ereyga “dabka-celin” macnaheedu maahan in shey uusan […]Read More
Ka dhig Gurigaaga Buuq la'aan-Qalabka Qalabka Difaaca ugu fiican
Waa maxay aaladda dhawaaqa? Difaaca dhawaaqa waa hab lagu yareeyo culeyska codka ee ku saabsan isha dhawaaqa iyo qaataha. Qalabka aan u isticmaalno si aan tan u gaarno waxaa loo yaqaannaa qalabka difaaca codka. Ninkii alifay sanqadha: Sanqadha cirka wuxuu bilaabay 1890s nin la yiraahdo Wallace Clement Sabine. Sabine, oo ah cilmiga fiisigiska ee Jaamacadda Harvard, [vard]Read More
Xul U Noqo Daaqadda Saxda Ah ee Loogu Talagalay Beertaada
Waa maxay Dhagaxa Dhulku? Dhagxaanta dhirta dhirta waxay siisaa kala duwanaansho beer iyo dheelitir iyadoo ay gacan ka geysaneyso abaabulka iyo aasaasida astaamo farshaxan. Dhagaxyadu sidoo kale waxay qayb ka qaadan karaan xakamaynta nabaad-guurka. Mar kasta oo aad ku darto dhagaxyo waaweyn, qodo meel si aad u dhigto oo u simo dayrka sidii loogu baahdo. Tani waxay xaqiijineysaa dhagxaanta inay yeeshaan xoog […]Read More
Xaaladda Dhismaha Muraayadda Farshaxan ee Dunida
Waa maxay Muraayadda Dhismuhu? Muraayadda Dhismaha waxaa loo yaqaanaa Muraayadaas, taas oo loo isticmaalo qalab ahaan. Waxaa badanaa loo isticmaalaa sida sheyga muraayadda hufan ee dhismaha, oo ay ku jiraan daaqadaha derbiyada dibedda. Dhismaha Muraayadda waxaa sidoo kale loo adeegsadaa qeeybo gudaha ah iyo ujeedooyin dhisme. Ayaa Sameeyay Muraayadda Koowaad? Miyaad […]Read More